Ralzaam Nu Nih Kawl Ralhrang Lak In An Zaam Lio Ah Rosung Fanu Dawh A Hrin – Buanchukcho
Kani Peng ah ralzaam nu pakhat nih ramtang an zaam lio lampi ah fanuteangeih. “Nway Oo Zin” tiah min an sak.
ကနီနယ်တွင် စစ်ဘေးရှောင်ရင်း ဗိုက်ကြီးသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ ရင်သွေးလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိခင်ကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ကယ်ထုတ်လာရင်း လမ်းမှာတင် ကလေးက မွေးဖွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကလေးရဲ့နာမည်ကိုတော့နွေဦးဇင်လို့ အမည်ပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်။ Source -သင်္ဂတုံချောင်းရိုးသတင်းစဉ်ကနီနယ်
thawngpang dang : R.I.P : A Poi Tuk E Aw Dalaan Pu Zaw Min Thant Ruangah KIA Pasal Tha An Thih Hi Cu Mu